Ma Shaxahan Ayay Jurgen Klopp & Steve Bruce Doonayaan In Ay Iskala Hor Yimaadaan Kulanka Anfield - Gool24.Net
Ma Shaxahan Ayay Jurgen Klopp & Steve Bruce Doonayaan In Ay Iskala Hor Yimaadaan Kulanka Anfield
Liverpool ayaa sabtida Anfield ku soo dhawaynaysa kooxda tababare Steve Bruce ee Newcastle United waana kulan kooxda Jurgen Klopp muhiimad wayn u yeelan doona. Inta badan wax sahlan ma aha in kooxuhu ay qaab ciyaareedkii ka hor kulamada caalamiga ah ay sii wadan karaan.
Liverpool waxay gabi ahaanba ilawday waxa ay la dhadhan tahay guuldaro garoonkeeda Anfield ku soo gaadha, waxayna Newcastle United kulankan iskeeni doontaa iyada oo si wayn uga walwalsan rekoodhka waalida ah ee uu Klopp ku abuurtay Anfield.
Tababaraha kooxda Newcastle United ee Steve Bruce oo kooxo badan oo Premier league ah ka soo shaqeeyay ayaa la filayaa in uu Liverpool kala hor iman karo koox difaac ahaan iyo khadka dhexe aad ugu xoogan.
Haddaba Siday noqon doonaan shaxaha ay Liverpool iyo Newcastle United ku soo shirtagi karaan kulanka Anfield ee sabtida?
Liverpool waxaa wali ka sii maqnaan doona goolhaye Alisson Becker kaas oo tababarka ku soo laabtay balse aanu Jurgen Klopp doonayn in uu garoomada kula soo deg dego.
Waxayna tani la micno tahay in goolhaye Adrian uu sii wadan doono booska goolhaye ee shaxda Liverpool iyada oo Alisson Becker uu wali sugi doono inta uu taam buuxa noqonayo.
Jurgen Klopp waxa uu dib ugu yeedhan karaa xidiga dhaawaca ka soo laabtay ee Naby Keita kaas oo ka soo kabsaday dhibaato badan oo soo haysatay tan iyo dhamaadkii xili ciyaareedkii hore.
Iyada oo Liverpool isla todobaadkan booqan doonta kooxda Napoli ee kulanka Champions League, waxa uu Klopp haystaa Naby Keita oo kulanka Newcastle United qayb kaga dhigan karo.
Laakiin Georginio Wijnaldum ayay hubaal tahay in aanu booskiisa lumin doonin kadib bandhigii cajiibka ahaa ee uu xulkiisa Holland kaga soo sameeyay kulamadii Germany iyo Estonia oo uu goolal ka dhaliyay isla markaana uu caawin ka sameeyay.
Laakiin waxa uu Klopp ka fikiri karaa in Wijnaldum uu u dhigto kulanka Napoli isla markaana uu James Milner shaxdiisa ku soo darsan karo. Henderson iyo Fabinbo ayaan la filayn in booskoodu muran gali karo.
Klopp ayaa la filayaa in uu difaacaa dhexe ee kooxdiisa ku sii aamini doono Van Dijk iyo Joel Matip inkasta oo Joe Gomez uu rajaynayo in kulanka Newcastle United ama Napoli in uu kaydka ka soo bixi doono.
Klopp ayaa nasin kara Trent Alexander-Arnold wuxuuna booskiisa difaaca midig ka ciyaar siin karaa Joe Gomez si da’yarka reer England uu awood buuxda ugu yeelan karo kulanka Napoli.
Waxa la sugayaa haddii uu Klopp isbadal ku samayn doono weerarka kooxdiisa ee Mohamed Salah, Sadio Mane iyo Roberto Firmino iyada oo la ogyahay khilaafkii kulanki Burnley.
Waxa uu Klopp kaydka ku soo hayay Shaqiri iyo Origi waxaana suurtogal ah in uu ka fikiri karo in Salah, Mane iyo Firmino midkood uu u nasin karo kulanka Napoli inkasta oo ayna taasi Klopp inta badan ahayn arin looga bartay.
Kooxda Newcastle United waxaa ka maqnaan doona Matt Ritchie iyo saxiixa cusub ee Allan Saint-Maximin.
Tababare Steve Bruce ayaan kulanka Liverpool u yeedhan karin xidigaha kala ah Florian Lejeune, Dwight Gayle iyo waliba gool dhaliyihii Liverpool ee Andy Carroll, inkasta oo DeAndre Yedlin uu tababarka ku soo laabtay.
Shaxda Macquulka Ah Ee Uu Steve Bruce kala hor iman Karo Liverpool:
Shaxda Macquulka Ah Ee Uu Klopp Kala Hor Tagi Karo Newcastle United: